My Collections!!!: April 2011
ကျွန်တော်တို့နေထိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူ၊ အရာဝတ္ထု၊ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့ပစ္စည်းများသည် ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်အာရုံအား အလွယ်တကူ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ မတော်တဆ သို့မဟုတ် တမင်သက်သက် ပြောလိုက်သော လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ စကားတစ်ခွန်းနှင့် အပြုအမှုသည် သင့်၏စိတ်အား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေခဲ့ပြီလား...?
တစ်ခါက ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် Sydney J.Harries သည် မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူ လမ်းဘေးတွင် သတင်းစာဝယ်လေသည်။ သတင်းစာယူပြီး မိတ်ဆွေကရောင်းသူအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့သော်လည်း ရောင်းသူမှာမျက်နှာမာနှင့် ဘာမှပြန်မပြောခဲ့ပေ။ ထိုအချင်းအရာကို မြင်သော Sydney J.Harries က “ဒီကောင့်အချိုးက မပြေဘူးနော်” ဟုဆို၏။
Sydney J.Harries........“ဒါကိုများ ခင်ဗျားက အားတုန့်အားနာနဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောနေသေးတယ်”
မိတ်ဆွေ...... “ကျွန်တော့်ရဲ့အပြုအမှုကို ဘာဖြစ်လို့ သူ့ကြောင့်ပြောင်းလဲရမလဲဗျာ”
ရင့်ကျက်သောလူတစ်ဦးတွင် ပျော်ရွှင်ခြင်းဟုသော သော့တစ်ချောင်းရှိသည်။ ထိုလူမျိုးသည် အခြားလူက သူ့အားပေးမည့် ပျော်ရွှင်ခြင်းမျိုးကို မျှော်လင့်မနေဘဲ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကိုသာ အခြားလူအား မျှဝေပေးတတ်သည်။
လူတိုင်း၏ စိတ်ထဲတွင် ထိုသော့မျိုးရှိသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့က ထိုသော့ကို အခြားလူလက်ထဲသို့ မသိမသာ ထည့်ပေးနေတတ်သည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးက “ကျွန်မအမျိုးသားက အိမ်မကပ်ဘူး.. အမြဲခရီးထွက်နေရတယ်..ကျွန်မ မပျော်ဘူး” ဟု ညည်းတွားသည်။ သူ၏ ပျော်ရွှင်ခြင်းသော့ကို သူ့ခင်ပွန်းလက်ထဲသို့ ထည့်ထားသည်။
မိခင်တစ်ဦးက “သားသမီးတွေ မလိမ္မာဘူး...ငါ စိတ်ညစ်တယ်” ဟုဆို၏။ သူသည် ထိုသော့ကို သားသမီး လက်ထဲတွင်ထားသည်။
အမျိုးသားတစ်ဦးက “သူဌေးက လခမတိုးပေးဘူး... ငါစိတ်ပျက်တယ်” ဟုဆို၏။ သူသည် သော့ကို သူဌေးလက်ထဲသို့ ထိုးထည့်ထားသည်။
ယောက္ခမတစ်ဦးက “ငါချွေးမ ငါ့ကို မရိုသေဘူး... စိတ်ဆင်းရဲတယ်”
လူငယ်တစ်ဦးက “အရောင်းစာရေးမက မျက်နှာမာနဲ့...ပိုက်ဆံပေးပြီး ၀ယ်တာကွ”
သူတို့သည် တူညီသော ညည်းချင်းများကို ညည်းကြသည်။ သူတို့၏ စိတ်အာရုံအား အခြားသူကို ထိန်းချုပ်ထားစေသည်။ ထိုသို့ မိမိ၏စိတ်အား အခြားသူကို အထိန်းချုပ်ခံခွင့် ပေးလိုက်သောအခါ သူတို့တွင် ဒေါသ၊ ညည်းတွားမှုနှင့် မပျော်ရွှင်ခြင်းတွေသာ ကျန်ခဲ့တော့သည်။ ပျော်ရွှင်ခြင်းဟုသော သော့ကို ကိုင်ဆောင်ထားသူသည် ကိုယ့်စိတ်ကို သူ့တစ်ပါးအား မထိန်းချုပ်စေဘဲ အရာရာကို အကောင်းမြင်စိတ်ဖြင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ တစ်ပါးသူပေးမည့် ပျော်ရွှင်ခြင်းကို မျှော်လင့်မနေတတ်ကြပေ။
သင်၏ပျော်ရွှင်ခြင်း သော့သည် မည်သူဆီမှာ ရှိနိုင်မည်နည်း? အမြန်ဆုံး သွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့ပါလေ...
original post from : http://www.youthwant.com.tw/
Chit Kae Tar Lar? Yuu Kae Tar Lar?
အဲဒီနှစ်က သူမ(၁၆)နှစ်ပထမဆုံးအကြိမ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို သူမ စစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။ အဲဒီကောင်လေးက သန့်ပြန့်တဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ အရပ်သိပ်မမြင့်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးကစားတာကို သူဝါသနာပါတယ်။ သူ့အသံကသြပြီး အက်ရှတယ်။ စာတော်ပြီး အခန်းထဲမှာ အမြဲပထမရတယ်။ အဲဒီခေတ်တုန်းက ငယ်ရွယ်တဲ့အချစ်ကို လူတွေအပြစ်မတင်ကြသလို မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြောင်းစဖွင့်ပြောလဲ သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ ကာလမဟုတ်ပေမယ့်လည်း သူ့ကိုဖွင့်ပြောမယ်လို့ သူမ ဘယ်တော့မှ တွေးမထားခဲ့မိဘူး။ အဝေးကနေပဲ သူ့ကိုငေးကြည့်နေရရုံနဲ့တင် သူမကျေနပ်ခဲ့တယ်။
သူနဲ့ လမ်းတစ်နေရာမှာဆုံမိပြီး နှုတ်ဆက်ရရင် သူမအရမ်းပျော်တတ်တယ်။ သူဘောလုံးကစားတာကို ကြည့်ချင်လွန်းလို့ ကျောင်းဆင်းလည်း အိမ်မပြန်ဘဲ ကစားကွင်းဘေးမှာ တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ် သူမ အပြေးလေ့ကျင့်နေတတ်တယ်။
စက္ကူကြယ်လေးတွေ သူမခေါက်သင်ပြီး နေ့တိုင်း စက္ကူလေးတွေပေါ်မှာ သူ့ကိုပြောချင်တဲ့စကားလုံးတွေ ချရေးပြီး စက္ကူကြယ်လေးတွေ သူမခေါက်ခဲ့တယ်။ ကြယ်လေးတွေကို ပုလင်းတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး သူမသိမ်းခဲ့တယ်။ သူနှစ်သက်မယ့် မိန်းကလေးမျိုးက နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ဖြောင့်စင်းမည်းနက်တဲ့ဆံပင်နဲ့ အရည်လဲ့ဝိုင်းစက်နေတဲ့ မျက်လုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ သူမ မကြာခဏတွေးထင်မိတယ်။ အဲဒီမိန်းကလေး ပြုံးရယ်တဲ့အချိန် ပါးစပ်က မဟတဟလေးဖြစ်မယ်လို့လည်း သူမမြင်ယောင်မိတယ်။
သူမမှာ မည်းနက်တဲ့ဆံပင်ရှိပေမယ့် နားရွက်ထိအောင်တိုတယ်။ သူမမှာ ဝိုင်းစက်တဲ့မျက်လုံးရှိပေမယ့် ရယ်လိုက်တဲ့အချိန် မျဉ်းတစ်ကြောင်းပုံစံ မှေးသွားတတ်တယ်။ တကယ်လို့ တစ်နေ့နေ့မှာ သူမသာ အဲဒီမိန်းကလေးပုံစံလို ဖြစ်သွားခဲ့ရင် သူစိတ်ဝင်စားလာမလားလို့ မှန်ကြည့်တိုင်း သူမစိတ်ကူးယဉ်တတ်တယ်။ အဲဒီလိုအမြဲတမ်း စိတ်ကူးယဉ်တွေးထင်ပေမယ့် လစဉ်လတိုင်း ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ပြေးပြီး အတန်ငယ်ရှည်လာတဲ့ ဆံပင်ကို သူမသွားသွားညှပ်တတ်တယ်။ ရယ်မောစရာတွေ့ရင်လည်း တဟားဟားနဲ့ မျက်လုံးတွေ မှေးကျသွားတဲ့အထိ သူမအော်ရယ်တတ်တယ်။
သူမ(၁၉)နှစ်မှာ နာမည်သိပ်မကြီးပေမယ့် အရမ်းလည်းအဆင့်မနိမ့်တဲ့ တက္ကသိုလ်တစ်ခုကို တက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ စာတော်တဲ့သူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ခြားမြို့က နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ကို တက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ရထားပေါ်ထိုင်ပြီး သူမကိုမွေးခဲ့၊ ကြီးခဲ့တဲ့မွေးရပ်မြေကို မျက်စိတစ်စုံငေးမောရင်း သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ လွမ်းဆွေးစရာတွေက သူမရင်ဝမှာ လှိုက်တက်လာခဲ့တယ်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘဝအစက ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ ရက်(၂ဝ)ကြာလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ စခဲ့ရတယ်။ ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ကျောင်းသူတချို့က စောင်ခေါင်းမြီးခြုံပြီး ချစ်သူကို ဖုန်းနဲ့ အလွမ်းတွေတိုင်တည်ကြတယ်။ အလွတ်ရနေတဲ့ ဂဏန်းတချို့ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သူမ နှိပ်ခဲ့ပေမယ့် ခေါ်ယူတဲ့ခလုတ်ကို သူမ မနှိပ်ခဲ့မိဘူး။ အသက်(၁၉)နှစ်ရောက်မှ လွမ်းဆွတ်တမ်းတတဲ့ခံစားမှုကို ပထမဆုံးအကြိမ် သူမခံစားခဲ့မိတယ်။ တကယ်တော့ လွမ်းဆွတ်ခြင်းဆိုတာ ရေရာတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ လူတစ်ယောက်ကို မျက်ရည်ကျစေအောင် ပေးနိုင်စွမ်းတဲ့ အင်အားတွေဖြစ်တယ်။
(၄)နှစ်ဆိုတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝက ရှည်လျားတယ်လို့ မဆိုသာဘူး။ အဲဒီမရှည်မလျားတဲ့ နေ့ရက်တွေကို တစ်ကိုယ်တည်း သူမဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ဘာဖြစ်လို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာ ကြင်ဖော်မရှာတာလဲလို့ သူမကိုမေးတဲ့အခါ သူမကရယ်ကျဲကျဲနဲ့ "စာတွေများလို့ပါ" ဆိုတဲ့ဆင်ခြေကိုပဲပေးခဲ့တယ်။ တကယ်လည်း သူမ စာကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူတက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်မှာ မာစတာဆက်တက်နိုင်ဖို့ သူမကြိုးစားခဲ့တယ်။
(၄)နှစ်အတွင်းမှာ သူမဆံပင်တွေ ရှည်လျားခဲ့တယ်။ တစ်ခါက ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်း တွေ့ဆုံပွဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေက ဖြောင့်စင်းရှည်လျားတဲ့ သူမဆံပင်ကြည့်ပြီး အံ့သြခဲ့ကြတယ်။ ဝိုင်းစက်တဲ့ သူမမျက်လုံးတွေက အရည်လဲ့လဲ့နဲ့ ပန်းရောင်သမ်းနေတဲ့ အသားအရည်၊ မဟတဟရယ်မောတတ်တဲ့ အပြုံးတွေကြောင့် တစ်ချိန်က ဆတ်ကော့ကော့ကောင်မလေးသူ့ကို လူတွေသိပ်မမှတ်မိခဲ့ကြဘူး။
သူမကိုတွေ့တဲ့အချိန် သူလည်းတစ်ချက်တော့ ကြောင်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက သူ့လက်ဟာ သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခါးသေးသေးကို ဖက်ထားပါတယ်။ သူ့ဘေးက သူမထက် ပိုနူးညံ့သိမ်မွေ့လှပတဲ့ ကောင်မလေးကိုကြည့်ပြီး နာကျင်သွားတဲ့စိတ်ကို ကွယ်ဝှက်ရင်း "မတွေ့တာကြာပြီနော်" လို့ပဲ သူမနှုတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်။
သူမ(၂၂)နှစ်မှာ ပထမအဆင့်နဲ့ သူတက်ခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်မှာ မာစတာတန်းကို တက်နိုင်ခဲ့တယ်။ သူက ကျောင်းပြီးတာနဲ့ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ အလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်။ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ထက်မြက်တာကြောင့် သူ့ရဲ့လခက ဂဏန်းခြောက်လုံးထိရှိခဲ့တယ်။ သူမက တစ်ကိုယ်ရည်ဘဝနဲ့ အပြောင်းအလဲမရှိ ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ ကျောင်းသားဘဝကို ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်နေပါတယ်။
ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ပြန်တဲ့တစ်ခေါက်မှာ အမေကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီး "သမီး... ပညာသင်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးဆိုတာ တစ်နေ့တော့ အိမ်ထောင်ပြုသားမွေးရမှာပဲ။ ဒါမှ ဘဝကလုံခြုံသွားမှာ" အမေ့စကားကို သူမခေါင်းညိတ်ပြပြီး ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ အခန်းထဲဝင်ခဲ့တယ်။ ခရီးဆောင်သေတ္တာကို ဖွင့်လိုက်ပြီး သေတ္တာထဲကနေ စက္ကူကြယ်အပြည့်ထည့်ထားတဲ့ ပုလင်းကို သူမအရင်ထုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စာအုပ်စင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ စာအုပ်စင်ပေါ်မှာ စက္ကူကြယ်ပုလင်းတွေ တန်းစီနေတယ်။ စုစုပေါင်း (၆)ပုလင်းရှိခဲ့ပါပြီ။
သူမ(၂၅)နှစ်...နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်က မာစတာဘွဲ့နဲ့ သူမ အကောင်းဆုံး အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ လခကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခု သူမရခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူက ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ စီးပွါးရေးတွေ ကြီးသထက်ကြီးအောင် ချဲ့နေခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ တတိယကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာ မြို့တော်ဝန်သမီးနဲ့ သူလက်ထပ်တဲ့ဖိတ်စာကို သူမလက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ သူ့မင်္ဂလာပွဲကို သူမ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သတိုးသားက ဘယ်လိုထက်မြက်ကြောင်း၊ သတိုးသမီးဖက်ကလည်း ဘယ်လောက်ချမ်းသာကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားပြန်ဖြစ်ကြောင်း စတဲ့ချီးမွမ်းစကားတွေ သူမကြားခဲ့ရတယ်။ ကျေနပ်အားရတဲ့ သူ့အပြုံးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး သူမရင်ထဲမှာလည်း အပျော်တွေကူးစက်ခဲ့တယ်။ သူ့ဘေးမှာ ရယ်မောပြုံးရွှင်နေတဲ့သတိုးသမီးဟာ သူကိုယ်တိုင်ပဲလို့ သူမခံစားမိတယ်။
အသက်(၂၆)နှစ်မှာ ကုမ္ပဏီက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးနဲ့ သူမ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစရင်းနှီးပြီး မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အထိ အချိန်နှစ်ဝက်မကြာခဲ့ဘူး။ အချိန်တိုတိုလေးအတွင်းမှာ ကိုယ်ယူမယ့်လူနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့၊ မဖြစ်ခဲ့ဆိုတာကိုတောင် သူမ မသိခဲ့ဘူး။ မင်္ဂလာပွဲကို သူမရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ ရိုးရိုးလေးပဲကျင်းပပြီး ရင်းနှီးသူတချို့သာ ဖိတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီည သူမအရက်တွေသောက်ခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် အရက်အများကြီး သောက်ခဲ့မိတယ်။ မမူးပေမယ့် သူမအန်ခဲ့တယ်။ သန့်စင်ခန်းထဲမှာ ရေမှုန်နဲ့ဝေဝါးနေတဲ့မှန်ထဲက ကိုယ့်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီး သူမအားရပါးရ ငိုချင်စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း မျက်နှာပေါ်က မိတ်ကပ်တွေကိုထပ်ဖို့ပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့သတိုးသမီးအဖြစ်နဲ့ သူမဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အနွေးထည်အိတ်ကပ်ထဲမှာတော့ အစောကြီးကတည်းက ခေါက်နှင့်ထားပြီဖြစ်တဲ့ စက္ကူကြယ်လေးတစ်လုံးက ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ စက္ကူပေါ်မှာ ဒီလိုလေးရေးထားပါတယ်။
"ဒီနေ့ ငါဟာ တစ်ခြားလူရဲ့ဇနီးဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် ငါ့ကိုယ်ငါသိတယ်။ နင့်ကိုပဲ ငါချစ်တယ်"
သူမ (၃၆)နှစ်...အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ သာမန်ဘဝတစ်ခုကို သူမဖြတ်သန်းနေတယ်။
တစ်နေ့ ဈေးမှာသူငယ်ချင်းဟောင်းတစ်ဦးနဲ့ သူမဆုံတော့ သူ့အကြောင်းကို ပြောမိကြတယ်။ သူ့စီးပွါးရေးတွေ မအောင်မြင်တဲ့အကြောင်း၊ မိန်းမနဲ့လည်း ကွဲသွားတဲ့အကြောင်း၊ နေ့တိုင်းလိုလို အရက်ဘား ရောက်နေကြောင်းတွေ သူမ ကြားခဲ့ရတယ်။
ရက်အတန်ကြာ သူမလှည့်ပတ်ရှာခဲ့မှ ဘားတစ်ခုမှာ သူ့ကိုတွေ့တယ်။ သူ့ကို သူမအပြစ်မတင်ဘူး။ ငွေစုဘဏ်စာအုပ်ပဲ သူ့ကို သူမကမ်းပေးလိုက်တယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ သူမစုဆောင်းထားသမျှတွေရှိတယ်။
"တစ် ကနေ ရှင်ပြန်စနိုင်မယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်"
ကမ်းပေးတဲ့ဘဏ်စာအုပ်ကို သူဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ သူ မယုံမကြည်ဖြစ်မိတယ်။ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းလို့ဆိုသူတွေက သူဆီက "ငွေချေးပါ"ဆိုတဲ့ စကားကိုကြားတာနဲ့ မျက်နှာတွေအေးစက်တင်းမာပြီး တစ်ဖက်လှည့်ကုန်ကြတယ်။ သူမကတော့ သူမနာမည်ကိုတောင် သူမေ့လုလုဖြစ်နေတဲ့ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းဟောင်း တစ်ယောက်သာဖြစ်တယ်။ ဒါတောင် သူ့အပေါ် ဒီလောက်ရက်ရောနိုင်ခဲ့တယ်။
"သူငယ်ချင်းဆိုတာ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ကူညီရိုင်းပင်းသင့်တယ် မဟုတ်လား?" အပြုံးမျက်နှာနဲ့ သူမဆိုတယ်။
ညရောက်တော့ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို သူမရဲ့ခင်ပွန်းသိသွားခဲ့တယ်။ ခပ်ပြင်းပြင်းလက်ဝါးစောင်းတစ်ခုနဲ့ အော်ငေါက်သံတချို့ သူမအပေါ် ကျရောက်လာခဲ့တယ်။
"မပြောမဆိုနဲ့ ဒီလောက်များတဲ့ငွေကို ပေးလိုက်ရသလား? သူနဲ့မင်း ရိုးသားရဲ့လား?"
လက်ဝါးဒဏ်ကြောင့် သူမကြမ်းပြင်ပေါ် ပစ်လဲကျသွားတယ်။ မျက်ရည်တစ်စက်မှ မကျမိသလို ခင်ပွန်းရဲ့အမေးကိုလည်း သူမ ပြန်မဖြေခဲ့ဘူး။ သူ့ကို သူမချစ်တယ်လို့ ဘယ်သူ့ဆီမှ သူမဝန်မခံခဲ့ဖူးသလို သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်နေကြတယ်လို့ တစ်ခြားလူတွေ ထင်မြင်ဆုံးဖြတ်တာကိုလည်း သူမ မလိုလားခဲ့ဘူး။
အဲဒီနှစ်မှာ အောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာ သူ့ကုမ္ပဏီလည်းပါခဲ့တယ်။ အဲဒီညက ချေးငွေတွေနဲ့ သူ့ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာ၁ဝ% လွဲပေးစာနဲ့အတူ သူမဆီ သူရောက်လာခဲ့တယ်။ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းက ပြုံးပြုံးရယ်ရယ်နဲ့ "ဒီလောက်ထိ အားနာစရာမလိုပါဘူးဗျာ... မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဆိုတာ အချင်းချင်း ကူညီကြဖို့ပဲ"လို့ ပြောဆိုနေပေမယ့် လက်က လွဲစာပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးနေပါတယ်။ သူမ ဘာမှဝင်မပြောခဲ့ဘူး။ "ထမင်းစားပြီးမှ ပြန်ပါလား" လို့ပဲပြောခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးရှင်က ထမင်းဖိတ်ကျွေးပြီဆိုမှတော့ သူ့မှာငြင်းဆန်ဖို့ ဆင်ခြေရှာမရခဲ့ဘူး။
စားပွဲပေါ်က ဟင်းတွေကိုကြည့်ပြီး သူအံ့သြမိတယ်။ ထမင်းဝိုင်းမှာ သူအရမ်းနှစ်သက်တဲ့ဟင်းတချို့ ပါနေတယ်။ သူခေါင်းမော့ပြီး သူမကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ သူမက နဂိုအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ ခင်ပွန်းကို ဟင်းတွေ ခူးခပ်ထည့်ပေးနေခဲ့တယ်။ အကြည့်ကိုရုပ်သိမ်းပြီး သူအတွေးများသွားတာဖြစ်မယ်လို့ သူထင်မိတယ်။
ပြန်ခါနီး အင်္ကျီအိတ်ထဲကနေ ဖိတ်စာတစ်စောင်ကို ထုတ်ပြီး "အဲဒီအချိန်ကျရင် နှစ်ယောက်စလုံးလာခဲ့ပါနော်" လို့ သူရယ်ကျဲကျဲပြောခဲ့တယ်။ ကုမ္ပဏီခွဲဖွင့်ပွဲဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပြီး ဖိတ်စာကိုယူပြီး သူမဖွင့်မကြည့်ဘဲ ဆိုဖာပေါ် လှမ်းတင်လိုက်တယ်။ သူ့ကိုအိမ်ပေါက်ဝထိ လိုက်ပို့နှုတ်ဆက်ပြီး မီးဖိုထဲမှာ သူမ ပန်းကန်တွေဆေးနေခဲ့တယ်။ ရုတ်တရက် ခင်ပွန်းဆီကနေ အော်ပြောသံတစ်ခုကို သူမကြားလိုက်မိတယ်။
"လူတွေက ပိုက်ဆံလေးရှိတာနဲ့ ဗွေရှုပ်တော့တာပဲဆိုတဲ့စကားက သိပ်မှန်တာပဲ။ ကြည့်စမ်း... မင်းရဲ့သူငယ်ချင်းဟောင်းကြီး ဘယ်လောက်မြန်သလဲ! နောက်မိန်းမယူတော့မယ်တဲ့"
ပန်းကန်ဆေးနေရာက သူမလက် ဆတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ ပဲ့နေတဲ့ပန်းကန်အနားက သူမလက်ကို တိခနဲ့ရှလိုက်တယ်။ ရှမိတဲ့နေရာကနေ သွေးတွေ တစ်စက်ချင်းစီးကျလာတယ်။ တဖြည်းဖြည်း နီလာတဲ့ရေတွေကိုကြည့်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့(၁၅)နှစ်တုန်းက သူ့ဘေးမှာပြုံးရွှင်ပြီး ရယ်မောနေတဲ့ သတိုးသမီးရဲ့ဝတ်စုံကို သူမမြင်ယောင်လာမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက သတိုးသမီးဝတ်ထားတာ ဒီအရောင်ပဲ မဟုတ်လား!
သူမ အသက်(၅၅)နှစ်တစ်နေ့ အိမ်မှာနေရင်း သူမ ရုတ်တရက်မူးလဲသွားတယ်။ ဆေးရုံပို့စစ်ဆေးတော့ ဆရာဝန်က သုန်မှုန်တဲ့မျက်နှာနဲ့ တစ်ခုခုကိုပြောဖို့ ခင်ပွန်းကို အခန်းထဲကခေါ်ထုတ်တယ်။ သူမ အဲဒီလောက်ထိ မထုံအခဲ့ပါဘူး။ ဆရာဝန်ကို လှမ်းခေါ်ပြီး သူမတိုက်ရိုက်မေးခဲ့တယ်။
"ကျွန်မ ဘယ်နှစ်ရက် အသက်ရှင်နိုင်ဦးမလဲ?"
(၃)လတဲ့! လူ့ဘဝက ပြဇာတ်ဆန်လွန်းခဲ့တယ်။ ဆေးရုံဆက်တက်ဖို့ သူမငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ အိမ်ပြန်ပြီး နောင်ရေးအတွက် လုပ်စရာရှိတာကို သူမလုပ်ခဲ့တယ်။ သက်တမ်းတစ်ဝက်လောက် ရှင်သန်ခဲ့တဲ့အတွက် မှာစရာတွေကလည်း သူမမှာများခဲ့တယ်။ သတင်းကြားတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေဟောင်းတွေ သူမကို နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်အနေနဲ့ လာကြည့်ကြတယ်။ သူက နောက်ဆုံးမှ ရောက်လာခဲ့သူပါ။ ကုတင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းပြီး သူမမှိန်းမောနေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့လက်ထဲက စက္ကူကြယ်တစ်ပွင့်ကိုတွေ့တော့ သူမချက်ချင်းနိုးထလာခဲ့တယ်။
သူ့လက်ထဲက စက္ကူကြယ်ကိုထိုးပြပြီး မျက်နှာပေါ်က အပြုံးတစနဲ့ သူမမေးတယ်။
"ဟို.. ဟို.. အော်... ဟုတ်.. ဟုတ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားအတွက် ကျွန်တော်ယူခဲ့တာပါ"
တကယ်တော့ အဲဒီကြယ်ပွင့်က သူလေယာဉ်ကွင်းကအထွက် အလှူခံနေတဲ့ကြက်ခြေနီအသင်းနဲ့ တိုးခဲ့လို့ ရခဲ့တဲ့ကြယ်လေးဖြစ်တယ်။ သူမကိုတွေ့ဖို့ပဲ သူစိတ်လောနေခဲ့လို့ အလှူငွေထည့်ပြီး တစ်ဖက်က ကမ်းပေးလိုက်တဲ့အရာကို မကြည့်ဘဲ ကတိုက်ကရိုက်ယူပြီး သူမဆီ သူအပြေးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ လောနေလို့ လက်မှာဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့အရာကို သူသတိမရခဲ့မိဘူး။
ကြယ်ကိုလှမ်းယူပြီး ရင်ဘတ်ပေါ် သူမတင်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဘေးစားပွဲပေါ် သူမလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်။ စားပွဲပေါ်မှာလည်း ခေါက်ပြီးသား စက္ကူကြယ်တစ်ပွင့်ရှိနေခဲ့တယ်။ အဲဒီကြယ်ကို အချိန်တစ်နာရီယူပြီး သူမခေါက်ခဲ့ရတယ်။
"အရင် ကျွန်မနေခဲ့တဲ့အိမ်မှာ ကြယ်လေးတွေ(၃၉)ပုလင်းရှိတယ်။ ကျွန်မကို မီးသဂြိင်္ုလ်တဲ့အခါ ဒီကြယ်နှစ်ပွင့်နဲ့ အဲဒီကြယ်လေးတွေကို ကျွန်မနဲ့အတူသဂြိင်္ုလ်ပေးပါနော်" ခပ်တိုးတိုးလေးပြောရင်း သူမမျက်လုံးတွေ မှိတ်ကျသွားခဲ့တယ်။
သူမရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို သူခေါင်းညိတ်မပြနိုင်ခင် သူမက ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ထွက်သွားခဲ့ပါပြီ။
သူမကိုသဂြိင်္ုလ်တဲ့ရက်မှာ သူမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ကြယ်(၃၉)ပုလင်းလုံး သူမနဲ့အတူ မီးရှို့ပေးခဲ့တယ်။ ပုလင်းထဲကနေ ကြယ်ကလေးတွေ ပြေးလွှားခုန်ပေါက် ထွက်ကျလာခဲ့တယ်။ မီးရှို့ပြီး သူလှည့်အထွက်မှာ မြေကြီးပေါ်ကျနေတဲ့ ကြယ်လေးနှစ်လုံးကို တွေ့လိုက်တယ်။ ကောက်ယူပြီး မီးထဲပစ်ထည့်ဟန်ပြင်ပြီးမှ သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရအဖြစ် သိမ်းထားဖို့ သူယူထားလိုက်မိတယ်။
မျက်မှန်ထူကြီးတပ်ပြီး ပန်းခြံမှာသူစာဖတ်နေတယ်။ (၄)နှစ်အရွယ် မြေးမလေးက စက္ကူစနှစ်ရွက်ယူပြီး သူ့ဆီပြေးလာတယ်။
"ဘိုးဘိုး.. ဘိုးဘိုး... သမီးကို စာဖတ်ပြပါ"
မျက်မှန်ကို တစ်ချက်ပင့်တင်ရင်း ပထမစက္ကူပေါ်ကစာကို သူဖတ်လိုက်တယ်။
"အောင်... ဒီနေ့ဝတ်ထားတဲ့ အပြာရောင်အားကစားဝတ်စုံက နင်နဲ့အရမ်းလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး ငါလည်းနံပါတ်(၉)ဂဏန်းကို ကြိုက်တယ်သိလား!"
သူ မျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုံ့သွားပြီး မြေးမလေးကို မေးတယ်။
"ဒါ စက္ကူတွေမဟုတ်ဘူး ဘိုးဘိုး... စာကြည့်စားပွဲပေါ်မှာ ဘိုးဘိုးတင်ထားတဲ့ ကြယ်လေးနှစ်ပွင့်ကို သမီးဖြည်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲမှာ စာရေးထားတာတွေ့တယ် ဘိုးဘိုး"
သူတစ်ချက် မင်သက်သွားပြီး ဒုတိယစက္ကူကို ကပျာကယာကြည့်လိုက်တယ်။
"အောင်... ပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးက ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကို ပေးဆပ်ခြင်းသက်သက်နဲ့ တစ်သက်လုံးချစ်နေတာပါပဲ"
"ပျော်ရွှင်ခြင်းတစ်မျိုးက ကိုယ်ချစ်တဲ့လူကို ပေးဆပ်ခြင်းသက်သက်နဲ့ တစ်သက်လုံးချစ်နေတာပါပဲ" အဖန်တလဲလဲ တီးတိုးရွတ်ဖတ်ရင်း သူ့ပါးပြင်ထက် မျက်ရည်တွေ အဆက်မပြတ် စီးကျလို့လာခဲ့တော့တယ်။
နိုင်းနိုင်းစနေ (Tuesday, December 08, 2009)
Phyu Sin Swar!
*ခန္ဓာအိမ်ကိုအရင်းပြု၍ သဘာဝဓမ္မကို လေ့လာခြင်း*
သီရိမာကို စွဲလမ်းစိတ် ဖြစ်ခဲ့စဉ်က ရာဂစိတ် အဓိပတိ ဖြစ်ခဲ့ရသော ကိုယ်တော်လေးသည် သုသာန် တစပြင်မှ သီရိမာ၏ ရုပ်အလောင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ရင်းမှ ဘုရားရှင်၏ ဒေသနာတော်ကို နာကြားလိုက်ရ သောအခါ…။
တင့်တယ်ခြင်းနှင့် မတင့်တယ်ခြင်း။ သုဘနှင့် အသုဘ။
သုဘနိမိတ်ကို မြင်သောအခါ စိတ်သည် စွဲလမ်းသည့်ဘက်သို့ ဦးတည်သည်။ အသုဘနိမိတ်ကို မြင်သောအခါ စိတ်သည် စက်ဆုပ်ရွံရှာသည့် ဘက်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ မြင်ကွင်း ပြောင်းသည့်အခါ စိတ်ပြောင်းသွားသည်။ မြင်ကွင်း အပြောင်းအလဲကို မည်သူက ဖန်တီးသနည်း။ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတည်းက ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကား သီရိမာ။
သီရိမာ၏ ခန္ဓာအိမ်နေရာတွင် အခြားသူတစ်ဦး၏ ခန္ဓာအိမ် အသစ်တစ်ခု အစားထိုး ၀င်ရောက်လာခြင်း မဟုတ်ပါ။ နဂိုရှိရင်းစွဲ သီရိမာ၏ ခန္ဓာအိမ်ကြီးကသာ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲသွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော သုံးရက်ခန့်က ကပိုကရို အလှကလေးနှင့်ပင် ကြည့်၍မ၀နိုင် ဖြစ်ခဲ့ရသော သီရိမာ၊ ယခုတော့ ဖရိုဖရဲ၊ ပြိုကွဲ ယိုစီး နံစော်၊ မြင်မကောင်း ရှုမကောင်း၊ ယင်တလောင်းလောင်းနှင့် နှစ်ခါပြန် ကြည့်ချင်စရာ မကောင်းတော့သည့် သီရိမာ။ ဖြစ်နိုင်လျှင် မကြည့်ချင်တော့။ မျက်လုံးစုံမှိတ် ထားလိုက်ချင်တော့သည်။
ဘယ်မှာလဲ ဟိုတစ်နေ့က ဆွမ်းမစားနိုင်လောက်အောင် စွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့ သီရိမာရဲ့ အလှပုံရိပ်တွေ။ ကိုယ်တော်လေးသည် အငွေ့အသက်ကို မမေ့ရက်စရာ အဖြစ် သတ်မှတ်သိမ်းဆည်း ထားခဲ့သည်ပဲ။ မျက်စိဖြင့် သီရိမာကို မြင်သည်။ မြင်သိစိတ် ဖြစ်ပေါ်သည်။ မြင်သိစိတ်နောက်က လိုချင်စိတ်ကလေး ကပ်ပါလာသည်။ ကြည့်စမ်း.. မြန်လိုက်သည့်စိတ်။
တပ်မက်မှု တဏှာစိတ်ကလေးက အမြစ်စတွယ်ပေပြီ။ အမြစ်တွေ ပွားလာသည်။ လိုချင်စိတ်သည် ကင်ဆာရောဂါနှင့် တူသည်။ အမြစ်ပွားနှုန်း မြန်လှသည်။ ရှေ့စိတ်သည် နောက်စိတ်ဆီသို့ လောဘ၏ သတ္တိကို အဆင့်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်း ပေးသွားသည်။ လောဘအိုးကြီးသည် တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာပေပြီ။ စိတ်နှင့်မဆန့်အောင် ကြီးထွားလာသောအခါ စိတ်သည် ထိုလောဘ၏ ၀န်ထုပ်ကို အလေးအပင် တစ်ခုအနေဖြင့် ပြန်ထမ်းနေရတော့သည်။ စိတ်ကြီးကား လေးလံလှချေပြီ။ လေးလံလာသောအခါ ထိုင်းမှိုင်းလာစမြဲ။ ကိလေသာ ဟူသမျှ ပူရသည်မှာမလွဲ။ ကိလေသာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော လောဘသည် အပူဓာတ်တွေကို ယူဆောင်လာသည်။ ထို အပူဓာတ်သည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိတော့။ ဘယ်မှာလာ၍ ငြိမ်းအေးနိုင်ပါတော့ မလဲ။
ထို့ကြောင့်ပင် ကိုယ်တော်လေးသည် သီရိမာ လောင်းလှူလိုက်သော ဆွမ်းကိုပင် မစားနိုင်တော့သည် အထိ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကိုယ်တော်လေး၏ စိတ်အတွင်းဝယ် သီရိမာ၏ ပုံရိပ် အငွေ့အသက်တွေသည် သုံးရက်တိတိ ၀င်မွှေ လောင်ကျွမ်းနေခဲ့သည်။ သတိလက်လွတ် ဖြစ်နေသောအခါ၊ သညာသည် တန်ခိုးထွားလာသည်။ ခုနက မှတ်ထားခဲ့သော သီရိမာ၏ ပုံရိပ်ကို သညာက အထပ်ထပ် ပုံဖော်ပေးနေသည်။ ကိုယ်တော်လေးသည် သညာခေါ်ရာသို့ လိုက်သည်။ အငွေ့အသက်ကို တကယ့်အရှိတရားဟု ကိုယ်တော်လေး ယုံကြည်နေသည်။ အမြင်မှားပေပြီ။ ဒိဋ္ဌိဝင်ပြီ။ ကိုယ်တော်လေး၏ အာရုံရိပ်တွင် အငွေ့အသက်အဖြစ် ပုံဖော်နေသော သီရိမာသည် အမှန်တကယ်တွင်မူ သုဿာန်တစပြင်၌ အလောင်းကောင်အဖြစ် ဖောက်ပြန်ချင်တိုင်း ဖောက်ပြန်နေချိန် ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကို ကိုယ်တော်လေးသည် မသိမမြင်။
ဒီတော့ သညက္ခန္ဓာကြီးက ပုံဖော်ပေးလိုက်၊ ဝေဒနက္ခန္ဓာက ချဲ့ပြီး ခံစားပေးလိုက်၊ ၀ိညာဏက္ခန္ဓာကြီးက လိမ်ပြီးသိနေလိုက်၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာကြီးက အမှားနောက် တကောက်ကောက် လိုက်လံပြုပြင် ပေးနေလိုက်နှင့် ကိုယ်တော်လေး၏ စိတ်သည် အလုပ်များခဲ့ရသည်။ ပင်ပန်းခဲ့ရသည်။ အဆမတန် ပူလောင်ခဲ့ရသည်။ အမြင်မှားမှုကို အခြေခံသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၏ နောက်၌ တန်းလန်း တန်းလန်း ပါလာသော အကျိုးတရားများမှာ အကုသိုလ်သတ္တိတွေသာ ကိန်းအောင်းနေပေသည်။
ကိုယ်တော်လေးခမျာ သုံးရက်လုံးလုံး ဆွမ်းခံမထွက်၊ ဆွမ်းမစား၊ တပိန်ပိန် တလိမ်လိမ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ သီရိမာမှ သီရိမာ။ ထိုသုံးရက် လွန်ပြီးနောက် သီရိမာဆိုသော အသံကို ကြားရမှ သပိတ်ကို ဆေးခဲ့သည့် သူ့အဖြစ်။ ထိုအခါမှ သပိတ်ထဲမှ ပုပ်သိုးနံစော်နေသော ဆွမ်းပုပ်တွေကို တွေ့ရသည်။ မေ့မြောရာမှ သတိလည်လာသူပမာ။ ဒါတောင် ဘုရားရှင်ဆိုသော အသံထက် သီရိမာဆိုသော အသံကိုသာ သူကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သုဿာန်သို့ အပြေးတပိုင်းနှင့် ထွက်လာခဲ့။ ကဲ.. တွေ့ရပြီ.. သီရိမာ။
အလို.. သူထင်သလို မဟုတ်တော့ပါလား။ သုံးရက်လုံးလုံး သူ့စိတ်ထဲ၌ အချိန်ပြည့် နေရာယူခဲ့သည့် သီရိမာတည်းဟူသော အငွေ့အသက်သည် ဒီပုံမဟုတ်။ သူ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သည့် ကပိုကရို အလှကလေးနှင့် သီရိမာသည် ဒီပုံစံမဟုတ်။ လုံးဝမဟုတ်။ သူ ထင်မှတ်မှား နေရော့လား။ သူ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေရော့လား။ စိတ်တွေထွေပြား၍ အမြင်မှားနေခြင်း ပေလား။
ဟော.. ဘုရားရှင်၏ အမေးတွင် ပရိသတ်အပေါင်းက တစ်ခဲနက် ညာသံပေး၍ ဖြေကြပေပြီ။ ဒီရုပ်အလောင်းကြီးသည် သီရိမာတဲ့။ မဖြစ်နိုင်တာ။ သူ့စိတ်ထဲက မည်သို့ ငြင်းပယ် ငြင်းပယ်၊ ဒီရုပ်အလောင်းကြီးသည် သီရိမာ အစစ်ပင်တည်း။ အားလုံး တစ်ခဲနက် ထောက်ခံနေကြပြီ။ ဟော.. အသက်ရှင်စဉ်က တစ်ရက်လျှင် အသပြာတစ်ထောင် တန်သည့် သီရိမာသည် ယခုတော့ အခကြေးငွေ မဆိုထားနှင့်၊ အခမဲ့ ယူမည့်သူပင် မရှိတော့ပြီကော။ ကဲ.. ဘယ်မှာလဲ သီရိမာရဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာ..။
သီရိမာရဲ့ တန်ဖိုးတွေသည် သီရိမာရဲ့ ဆံပင်တွေထဲမှာလား။ ဘယ်မှာ ဟုတ်နိုင်ပါတော့မလဲ။ မဖြီးမလိမ်း၊ မပြင်မဆင်ထားတော့ ဘယ်မှာလဲ ဆံပင်ပုံ၊ ဆံထုံးပုံ။ ဖွာလန်ကြဲ မွဲခြောက်နေတဲ့ ဆံပင်တွေမှာ ဖုန်တွေ အလိမ်းလိမ်းနဲ့။ ရုပ်ပျက်လိုက်တာ။
ကိုယ်တော်လေးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အငွေ့အသက်အဖြစ် အရိပ်ခိုခဲ့တဲ့၊ ကိုယ်တော်လေးရဲ့ စိတ်ကို အလွှမ်းမိုးကြီး လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ သီရိမာရဲ့ မျက်နှာလေးကရော၊ ဘုရား.. ဘုရား.. ကြည့်နေရင်းမှပင် မျက်လုံးကြီးနှစ်ဖက် ထပေါက်တော့မယ့် အတိုင်းပါလား။ ဖူးရောင်ရုန်းကြွ ခုံးထနေတာ.. ဖောက်ခနဲ ပေါက်သွားလိုက်ရင်ဖြင့်..။ နှာခေါင်းကြီးကလည်း ပွထ၊ အထက်နှုတ်ခမ်း၊ အောက်နှုတ်ခမ်း အစုံကလည်း ထူလပျစ်။ ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကလည်း ပါးချိတ်ရောင်.. သွားကိုက် ဝေဒနာသည်လို ရောင်ကား ဖောင်းထနေလိုက်တာ။ အလို.. ပါးစပ်ထဲကလည်း အပုပ်ရည်တွေ စီးကျနေလိုက်တာ..။ အခုရနေတဲ့ အပုပ်နံ့တွေဟာ အဲဒီ့ အပုပ်ရည်တွေဆီကလား မသိ။
ကိုယ်တော်လေးသည် စိတ် မသက်သာစွာဖြင့် မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်လိုက်သည်။ သူ့စိတ်ထဲတွင် နေရာယူထားသော သီရိမာ၏ ပုံရိပ် အငွေ့အသက်တို့သည် တဖြည်းဖြည်း လွင့်ပြယ်စ ပြုလေပြီ။ ဒီပုံကြီးဆိုရင်ဖြင့် သီရိမာကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်း ထားနိုင်ပါတော့မလဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ပုံဖော် စိတ်ကူးယဉ်နိုင်ပါတော့ မလဲ။ ခဏတဖြုတ် ကြည့်လိုက်ရတဲ့ အချိန်ကလေး မှာတောင် ဆက်မကြည့်ချင်တော့လို့ မျက်စိကို မှိတ်လိုက်ရတာ။
ကြည့်ပါဦး.. လည်ပင်းကြီးကလည်း အဆမတန် ရောင်ကိုင်းကြီးထွား နေပါပကောလား။ ပခုံးတွေ၊ လက်တွေလည်း ရောင်ကိုင်း ပွထနေလိုက်တာ။ ၀တ်ထားတဲ့ အရှက်လုံအင်္ကျီ ဖျင်စတွေပင်လျှင် အချို့နေရာမှာ ချုပ်ရိုးပြုတ်လိုပြုတ်၊ ကွဲထွက်လို ကွဲထွက် ဖြစ်နေပါရော့လား။ ရင်ဘတ်ကြီး မို့မောက်လိုက်ပုံကလည်း တောင်ကုန်းတစ်ကုန်းလို။ အို.. ဗိုက်ပေါ်က အ၀တ်စတွေမှာလည်း စိုရွှဲ ရိရွဲလို့။ အပုပ်ရည်တွေ စွန်းထင်း ပေကျံနေပါရောလား။ နံလိုက်တာနော်။
ပေါင်မှသည် ခြေသလုံး။ နည်းတဲ့ ရောင်ကိုင်း ပွထမှုကြီးမဟုတ်။ သီရိမာသည် မူလခန္ဓာကိုယ်ထက် နှစ်ဆကျော်ကျော်၊ သုံးဆနီးပါး ရှိနေချေပြီ။ ခြေချောင်းတို့၏ တုတ်ခိုင် ပွထမှုများကတော့ မပြောပါနဲ့တော့။ အ၀လွန်နေသည့် မိန်းမတစ်ယောက်၏ ဖ၀ါးတွေ၊ ခြေချောင်းတွေလို။ အ၀လွန်သည့် မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ပိုးစိုးပက်စက် ပစ်စလက်ခတ် အိပ်နေသည့်ပုံကြီးနှင့် တူလွန်းလှသည်။ဒါဟာ အလှဘုရင်မ တစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်ကလာပ်တဲ့လား..။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ခြုံကြည့်လိုက်တော့ မှိုင်းဝနေသော မီးပုံးပျံကြီးလို ဖြစ်နေသေည့် သီရိမာ။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပေးနေရသော နာမ်ခန္ဓာတစ်ပါးဖြစ်သည့် သင်္ခါရက္ခန္ဓာကြီး အလုပ်မလုပ်တော့သော အခါ ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးသည် ပိုင်ရှင်မဲ့သူ တစ်ဦးအဖြစ် ကျန်ခဲ့ရသည်။ မှတ်သားခြင်း၊ သိမြင်ခြင်း၊ ခံစားခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေသော နာမ်ခန္ဓာလေးပါးသည် သူတို့ အမှီပြု အလုပ်လုပ်ရာ ကာယခန္ဓာကြီးကို ရက်စက်စွာ ထားရစ် စွန့်ပစ်ခဲ့ကြလေပြီ။ ရုပ်ခန္ဓာ တစ်ပါးဖြစ်သော ရူပက္ခန္ဓာကြီးသည်လည်း ညီတော်နောင်တော် ပီသစွာ နာမ်ခန္ဓာ လေးပါးနောက်သို့ တစ်ပါတည်း လိုက်သွားခဲ့ပေပြီ။ သူတို့ငါးပါး အုပ်စုသည် နောက်ခန္ဓာအိမ် အသစ်တစ်ခု၌ အလုပ်တွေ လုပ်နေကြပေပြီ။ သို့သော် သီရိမာ၏ ခန္ဓာအိမ်အဟောင်းတွင် ဖြစ်ခဲ့သော ခန္ဓာငါးပါးတော့ မဟုတ်တော့ပါချေ။ အဟောင်း ချုပ်ငြိမ်း၍ အသစ်အသစ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခန္ဓာငါးပါးတို့သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ မူလက သူတို့ အမှီပြု အလုပ်လုပ်ရာ ဌာနကြီးဖြစ်သော သီရိမာ၏ ခန္ဓာအိမ် အဟောင်းကြီးသည် ယခုမူ ပိုင်ရှင်မဲ့အဖြစ် သုဿာန် တစပြင်၌ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေလေပြီ။
ဤသည်ကို တရားနာ ပရိသတ်အဖြစ် ရောက်ရှိနေသော သီရိမာ နတ်သမီးကိုယ်တိုင် ပြတ်ပြတ်ထင်ထင် သိမြင်နေရသည်။ ယခင်က ရာဇဂြိုဟ်မြို့က ပြည့်တန်ဆာ သီရိမာ။ ယခုတော့ ယာမာနတ်ပြည်က နတ်သမီး သီရိမာ။ သူ့ခန္ဓာအိမ် အဟောင်းကို သူကိုယ်တိုင် အသုဘ ပြန်ရှုနေရသော အဖြစ်။ ဒီခန္ဓာအိမ်ကို အမှီပြု၍ သီရိမာသည် ငါမှငါ ဖြစ်ခဲ့သေးသည်။ ငါ့ခန္ဓာ၊ ငါ့အလှဟူ၍ မာန်တွေ တက်ခဲ့သေးသည်။ ထိုမာန်တွေကြောင့်ပင် ဥတ္တရာကို ဆီပူနှင့် လောင်းချခဲ့သည်အထိ ကျူးလွန်ခဲ့မိသေးသည်။ ဥတ္တရာ၏ ခင်ပွန်းသည် သုမန သူဌေးသားကို ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်တွေ ဖြစ်ခဲ့သေးသည်။ အဲဒီ သီရိမာဆိုတာကြီးကို အခုဘယ်မှာ အသုံးချနိုင် ပါတော့မလဲ။ အခုတော့ သီရိမာဆိုသော အပေါင်းအစု၊ အစုအဝေးကြီးသည် ဘာမျှ တုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်း မပြုနိုင်တော့ပြီကော။ ဒီအစုအဝေးကြီးကို ကိုင်စွဲ၍.. ငါဟဲ့၊ သီရိမာဟဲ့ဟု ပြောဆို ဆက်ဆံခဲ့တာတွေသည်..။
ကြည့်စမ်း.. ငါတည်းဟူသော သီရိမာ၏ ခန္ဓာကို အစွဲအလမ်းကြီး စွဲလမ်း၍ သောက ပရိဒေ၀မီး တောက်လောင်နေရှာတဲ့ ကိုယ်တော်လေး..၊ သီရိမာရဲ့ ခန္ဓာလို့ ထင်နေတဲ့ ကိုယ်တော်လေးခမျာ မသက်မသာ ပင်ပန်းနေရှာ ပါလား။ ဒီမှာ ကိုယ်တော်လေး..။ တပည့်တော်မဟာ ယာမာ နတ်ဘုံမှာ နတ်သမီး သီရိမာ ဖြစ်နေပါပြီ။ အခု ဘုရားရှင်က တပည့်တော်မ အလောင်းကို ရှုကြည့်ပြီး တရားဟောမယ် ဆိုလို့ တပည့်တော်မ ယာမာနတ်ပြည်ကနေ အပြေးလာခဲ့ရတာ။ တပည့်တော်မရဲ့ ခန္ဓာအိမ် အသစ်ကို ကိုယ်တော်လေး ဘယ်မြင်နိုင်ပါဦး မလဲ။ ကောင်းပါပြီလေ.. ကိုယ်တော်လေး အခုမြင်နေတဲ့ တပည့်တော်မရဲ့ ခန္ဓာအိမ် အဟောင်းဟာ ကိုယ်တော်လေး ရှေ့မှာပဲ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲနေပုံကို ကိုယ်တော်လေး မြင်ရင်းက သံဝေဂ ရပါစေတော့..။
ကိုယ့်ရုပ်အလောင်းကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင်းက ဖြစ်ပျက်တရား၊ ပြုပြင်မှု တရား၊ ဖောက်ပြန်မှု တရားတွေကို ဉာဏ်ဖြင့် အထပ်ထပ် ဆင်ခြင် ရှုပွားလေသော် ဘုရားရှင်၏ ဒေသနာအဆုံး၌ နတ်သမီး သီရိမာသည် အနာဂမ် တည်ခဲ့လေပြီ။
ကိုယ်တော်လေးကား လက်ငင်း မြင်တွေ့နေရသည့် အမှန်တရားကို လက်မလွတ်စတမ်း ဆုပ်ကိုင် ဖမ်းယူရင်းမှ ဖြစ်ပျက်၊ ဖောက်ပြန် ပြုပြင်မှု၊ အနိစ္စ လက္ခဏာတို့ကို ရှုပွား ဆင်ခြင်မိသောအခါ သောတာပတ္တိမဂ်သို့ ဆိုက်ရောက်လေ တော့သည်။ကိုယ်တော်လေး၏ အမြင်သည် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှ သမ္မာဒိဋ္ဌိသို့ ပြောင်းခဲ့လေပြီ။
တကယ်တော့ သီရိမာဟူသည် ကေသာ၊ လောမာ၊ နခါ၊ ဒန္တာ၊ တစော ဟူသော ဆံပင်၊ မွေးညင်း၊ ခြေသည်း လက်သည်း၊ သွား၊ အရေထူ၊ အရေပြား စသည့် ၃၂ ကောဋ္ဌာသ အစိတ်အပိုင်းတို့ ပေါင်းစုထားသော အစုအဝေးကို တိုတိုနှင့် လွယ်လွယ် ခေါ်လိုက်ခြင်း မဟုတ်လော..။
ကိုယ်တော်လေး၏ ဉာဏ်အမြင် ပြောင်းသွားလေပြီ။ ကိုယ်တော်လေးသည် သီရိမာ၏ ခန္ဓာအိမ်မှ တစ်ဆင့် သဘာဝ ဓမ္မတစ်ခုကို တွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ သည့်အတွက် သီရိမာ၏ ခန္ဓာအိမ်သည် အရင်းအနှီး တစ်ခုအဖြစ် ပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။ နတ်သမီး သီရိမာအတွက် ပင်လျှင် သူမ၏ ဘ၀ဟောင်း ခန္ဓာအိမ်သည် သူမ အနာဂမ် ဖြစ်ဖို့အတွက် အရင်းအနှီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်သာ။
ခန္ဓာအိမ်ကို အရင်းပြု၍ သဘာဝဓမ္မကို လေ့လာမိခြင်းကြောင့် ရရှိသော အကျိုးကား ကြီးမားလှပေစွ..။
ဆရာမြသန်းစံ ရေးသားသော “ခန္ဓာအိမ်ကို အရင်းပြု၍ သဘာဝဓမ္မကို လေ့လာခြင်း” စာအုပ်မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။
by Pyae Sone Aung on Friday, January 21, 2011 at 10:32am Posted by
ဒီကနေ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် မြန်မာပြည် ပြန်မည်ဖြစ်၍ ဘူတာကို လိုက်ပို့ဖြစ်တယ်။ နေ့လို့သာ ပြောတာပါ။ တကယ့် တကယ် ရထားထွက်မှာက ည ၁၁- နာရီမှပါ။ လိုက်ပို့ပေးကြတဲ့ တခြား သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အများကြီး။ ရထားဆိုက်တော့ သူငယ်ချင်း ပစ္စည်းတွေ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း တစ်စု ၀ိုင်းပြီး တင်ပေးကြတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမှာလို အထမ်းသမားတွေ မရှိတော့ ခရီးသွားတာ ပစ္စည်းပစ္စယ အထုပ်အပိုး များရင် အတော် ဒုက္ခရောက်ရတာပါ။
အဲသလို ပစ္စည်းတွေ ၀ိုင်းတင်နေတုန်း ဘုတ် ဘုတ် ဆိုပြီး အသံကြားတာနဲ့ ကျွန်တော် နောက်လှည့်ကြည့်မိတော့ အထုပ်နှစ်ထုပ်။ လက်ဆွဲအိတ် တစ်ထုပ်၊ ကြွတ်ကြွတ်အိတ် တစ်ထုပ်။ ဘယ်သူပစ်ချ သွားမှန်း ကျွန်တော် မသိလိုက်ဘူး။ ဘေးက သူငယ်ချင်းကို မေးတော့လည်း မသိလိုက်ဘူးတဲ့။ “ဘယ်သူ့ အထုပ်တွေပါလိမ့်၊ တခြား တစ်ယောက်ယောက်များ ခုနေ ဆွဲသွားလို့ကတော့ ဒုက္ခပဲ” ဆိုပြီး ကျွန်တော် တွေးနေခိုက် လက်ထဲမှာ အထုပ်နှစ်ထုပ်နဲ့ အူယား ဖားယား ပြေးသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် တွေ့လိုက်တယ်။ သေချာ ကြည့်မိတော့ အသက် ၆၀- ၀န်းကျင် ပိန်ပိန်ပါးပါး အဖိုးအို တစ်ဦးပဲ။ “ဒီ အဖိုးကြီးတော့ အထုပ် လေးထုပ်နဲ့ ပျာယာ ခတ်နေပြီဟေ့” လို့ ဘေးနားက လူတစ်ယောက် ပြောလိုက်သံ ကြားတော့မှ “အော် ခုန ပစ်ချသွားတဲ့ အထုပ်နှစ်ထုပ်က ဒီအဖိုးရဲ့ အထုပ်နှစ်ထုပ်ပဲ၊ အထုပ် လေးထုပ်ဆိုတော့ မနိုင်တာနဲ့ နှစ်ထုပ် သယ်လိုက်၊ ပစ်ချခဲ့လိုက်.. နောက် နှစ်ထုပ် ပြန်သည်လိုက် လုပ်နေရတာပဲ” ဆိုပြီး ကျွန်တော် သဘော ပေါက်တော့တယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ တစ်မျိုးဖြစ် သွားတယ်။ သနားတာလား၊ ကိုယ်ချင်း စာတာလား၊ ကရုဏာလား တစ်ခုခုတော့ တစ်ခုခုပဲ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဘာမှ သိပ်မစဉ်းစား တော့ဘူး..။ အဲဒီ အဖိုး ကျွန်တော့နားက အထုပ် နှစ်ထုပ်ကို လာယူတဲ့ အချိန် “ကျွန်တော် ဘာကူညီ ပေးရမလဲ အဖိုး” လို့ ရုရှားလို မေးလိုက်မိတယ်။ အဲဒီ အဖိုးလည်း ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး တစ်ခုခုတော့ ပြောလိုက်တယ်။ သေသေချာချာ ကျွန်တော် နားမလည်လိုက် ပေမယ့် အကူအညီ လိုတဲ့ စကားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သဘောပေါက်တာနဲ့ ကျွန်တော် အထုပ်နှစ်ထုပ်ကို ဆွဲလိုက်တယ်။ တဆက်တည်း အဲဒီ အဖိုး သွားတဲ့ နောက် အပြေး လိုက်သွားလိုက်တယ်။ “ပထမတွဲ” လို့ အဖိုးရဲ့ ပြောလိုက်သံတော့ ကျွန်တော် ကြားလိုက်တယ်။ ရထားကလည်း ထွက်ခါနီးနေပြီ။ အဖိုးကလည်း အထုပ်နှစ်ထုပ် ဆွဲလို့ ရှေ့က သုတ်သုတ် သုတ်သုတ်နဲ့ အပြေးတစ်ပိုင်း၊ ကျွန်တော်ကလည်း နောက်က အူယား ဖားယား။ ရထား မှီမှ မှီပါဦးမလား။ ဘုရား ဘုရား မှီပါစေ။
တော်သေးတာပေါ့။ ပထမတွဲ ရောက်တော့ ရထားပေါ် တက်နေတဲ့ ခရီးသည်က အဖိုး ရှေ့မှာ တစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်။ အဲဒီ တစ်ယောက်ပြီးရင် ဒီအဖိုးက နောက်ဆုံး။ အဲဒီ အဖိုးလည်း အထုပ်တွေ ပစ်ချရင်း ကျွန်တော့်ကို ကျေးဇူး တင်ကြောင်း၊ ရထား လက်မှတ်ဖိုးက ရူဘယ်လ် ၆၀၀ ပေးရကြောင်း.. စသဖြင့် ဝေေ၀ဆာဆာ မမောမပန်း ပြောနေလေရဲ့။ (အခု လက်ရှိ ရူဘယ်လ် ၆၀၀-က မြန်မာငွေ နှစ်သောင်းနီးပါးနဲ့ ညီမျှပါတယ်) ကျွန်တော်ကလည်း ရပါတယ်၊ ကျေးဇူး တင်ဖို့ မလိုကြောင်း တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ပြန်ပြောမိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်ပြောတဲ့ ပါးစပ်က စကားလုံးတွေက ကျွန်တော့် ရင်ထဲက ခံစားနေရတဲ့ ပီတိကိုတော့ မှီနိုင်စွမ်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် တော်တော့်ကို ပျော်ရွှင် ၀မ်းသာမိတာပါ။ ကျွန်တော့်ကြောင့် လူတစ်ယောက်ကို ကူညီ လိုက်နိုင်တယ်၊ ရထားမှီအောင် လုပ်ပေးလိုက် နိုင်တယ်။ ရထားပေါ်ကို အထုပ်တွေ ၀ိုင်းတင်ပေးပြီတာနဲ့ အဖိုးကို နှုတ်ဆက်လို့ ကျွန်တော် ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာတော့ အတွေးလှိုင်းတွေ ပလုံစီလို့၊ ပီတီလှိုင်းတွေ ရိုက်ခတ်လို့…။
(သီဟိုဠ်ခေတ် ဖြစ်မည်ထင်သည်) ရဟန်းတစ်ပါး အကြောင်း ကျွန်တော် ကြားနာဖူးသည်။ ထိုရဟန်းတော် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးနေစဉ် ဆွမ်း သုံးလေးလုတ်သာ အကျန်တွင် သားသည် ခွေးမလေး တစ်ကောင် အစာ လာတောင်း၍ ထို သုံးလေးလုတ်စာ ဆွမ်းကို ချကျွေးလိုက်၏။ သို့သော် သားသည် မိခင် ခွေးမလေးသည် ထို သုံးလေးလုတ်စာဖြင့် မ၀။ အရှင်မြတ်ထံ အသနားခံသော မျက်ဝန်းတို့ဖြင့် အမြီးလေးနှံ့ကာ တောင်းနေပြန်၏။ အရှင်မြတ်လည်း ခွေးမလေး အပေါ် စာနာစိတ်ဝင်ကာ မိမိလက်ဖြင့် အာခေါင်ကို နှိုက်၍ အန်ကျွေးရှာလေ၏။ တစ်ခါ အန်ကျွေး၍ မ၀တော့ နောက်တစ်ခါ ထပ်အန်ကျွေး၊ ဒီလိုနဲ့ အန်ကျွေးလိုက်တာ.. သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်။ ဒီတရား နာကြားမိတော့ အရသာ ရှိလိုက်တာ.. ကြည်ညိုလိုက်တာ..။
ဘ၀တစ်ခုတွင်လည်း ဘုရားအလောင်းတော်သည် တွင်းထဲတွင်ကျကာ တွင်းပေါ် ပြန်မတက်နိုင်ဘဲ အားအင် ပြတ်လတ်နေသော ကျားမတစ်ကောင်အား မိမိကိုယ်တိုင် တွင်းထဲသို့ ဆင်းကာ ကျားစာ အဖြစ်ခံသည် အထိ အသက်ကို ပေးကာ ဘ၀ကို စတေးဖူးသတဲ့။
လောကတွင် လူတစ်ဦးက တစ်ဦးကို၊ လူတစ်ဦးက တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်ကို.. စသဖြင့် ကူညီ ပေးဖူးကြပေမည်။ ကူညီ ပေးဖူးကြသည်။ သို့သော်.. ထိုသို့ ကူညီနိုင်အောင်၊ ကူညီ ဖြစ်သွားအောင် ထို ကူညီမည့် သူသည် မည်ကဲ့သို့ နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်သွားသနည်း။ မည်ကဲ့သို့ နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်သင့်သနည်း။
ဤနေရာတွင် ကျွန်တော် နာကြား မှတ်သားဖူးသော ပိုင်းလော့ ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ အဆုံးအမအား အခြေခံ၍ ပြောကြားလိုပါသည်။
လောကတွင် အကူအညီ လိုအပ်နေသူ တစ်ဦးအား၊ ဒုက္ခရောက်နေသူ တစ်ဦးအား၊ ဆာလောင် မွတ်သိပ်နေသော တိရစ္ဆာန် တစ်ကောင်အား စသဖြင့် ကူညီ ဖြစ်သွားခြင်း၊ ကျွေးမွေး ထောက်ပံ့ဖြစ်ခြင်း၊ လှူဒါန်း ပေးကမ်းခြင်း တို့သည် အဓိက အားဖြင့် မေတ္တာစိတ်ကို အခြေခံသော ကြောင့်တည်း။ ထို မေတ္တာစိတ် ပေါ်လာရခြင်းမှာလည်း ထို ဒုက္ခရောက်နေသောသူ၊ ထို ဆာလောင်နေသော တိရစ္တာန်နေရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင် ၀င်ခံစားကြည့်မိ သောကြောင့်တည်း။ တစ်နည်း အားဖြင့် မိမိ နှလုံးသားနှင့် ထို ဒုက္ခရောက်နေသော သူ၏ နှလုံးသား၊ ထို ဆာလောင်နေသော တိရစ္ဆာန်၏ နှလုံးသားအား ထပ်တူပြု လိုက်ခြင်းကြောင့်တည်း။ ထိုသို့သာ ထပ်တူပြု၍ ခံစားတတ်သွားပြီ ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကတွင် မစွန့်လွှတ်ရဲသော အရာ မရှိလောက်အောင် ရှားသွားပေမည်။
ခွေးကို အန်ကျွေးသော ရဟန်းတော်အား ကြည့်ပါ။ ထိုနေရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင် ဆိုလျှင် မည်သို့ ပြုမူမည်နည်း။ ထို ရဟန်းတော်လို အန်ကျွေးရဲပါ့မလား၊ အန်ကျွေးနိုင်ပါ့ မလား၊ အန်ကျွေးဖို့ကော စိတ်ကူးမိကြမှာလား..။
မေတ္တာစိတ်သာ မွေးကြည့်ပါ။ မိမိသာ ထိုခွေးမလေး နေရာမှာ ဆိုလျှင် တော်တော် ဆာလောင်ရှာမှာပဲ၊ ဆာလောင်မှု ဒဏ်ကို တော်တော် ခံစားရရှာမှာပဲ ဟူ၍ မိမိ နှလုံးသားနှင့် ထိုခွေးမလေး၏ နှလုံးသားအား ထပ်တူသာ ပြုကြည့်၍ ခံစားကြည့်ပါ။ (ခွေးနှင့် နှိုင်းသည်ဟု မယူဆစေလိုပါ။) ထို ရဟန်းတော်လို အန်ကျွေးရဲပါ လိမ့်မည်။
ဟော.. ဘုရား အလောင်းရဲ့ ပေးဆပ်မှုကကော.. အသက်ကိုတောင် စတေးသွားတာ..။ သက်တောင့်သက်သာ စတေးရတာမဟုတ်၊ ကျားစာအဖြစ်ခံ.. ကျားအကိုက်ခံပြီး စတေးရတာ၊ ပေးဆပ်ရတာ..။ သူကတော့ ဘုရားအလောင်းမိုိ့လုိ့ဟု ဆင်ခြေ မကန်ပါနှင့်.. ထိုအချိန်က ဘုရားလောင်းသည်လည်း သူလိုကိုယ်လို လူသားတစ်ဦးပဲလေ..။ အော် မေတ္တာတရား ကြီးမားလိုက်တာ.. နှလုံးသားချင်း ထပ်တူပြုလုိ့ ခံစား ပေးဆပ်မှုက တုနှိုင်းမဲ့လိုက်တာ..။
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေကော.. ရဟန်းတော်လို အန်ကျွေးရဲအောင်၊ အန်ကျွေးနိုင်အောင်.. နောက်ဆုံးအဆင့် ဘုရားအလောင်းလို မိမိအသက်ကိုပါ အသေခံသည်အထိ ပေးဆပ်တတ်အောင် ဘယ်လို နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင်ကြမလဲ..။ မေတ္တာပါပဲ။ ဟုတ်သည်။ မေတ္တာကို အခြေခံတာပါပဲ။ မေတ္တာအား ကြီးမားလာသည်နှင့် အမျှ စွန့်လွှတ် ပေးဆပ်မှုတို့ ကြီးထွားသွားတာ ပါပဲ..။
ထို့အတူ ဒါန အမှု၊ သီလ အမှုတို့ ပြုကြသော အခါတွင်လည်း ပကာသနကို အခြေခံသော၊ သို့မဟုတ် ထင်ပေါ်လိုသော၊ သို့မဟုတ် နောင်ရရှိမည့် အကျိုးတရားတို့ကို မစဉ်းစားဘဲ နိဗ္ဗာန်ကို ရည်စူးသော စိတ်ဖြင့် နှလုံးသားချင်း ထပ်တူပြု၍ မေတ္တာရှေ့ထား တတ်သော စိတ်သဘောထား အကျင့်များကို လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ကြည့် စေချင်ပါသည်။
ဥပမာ နေပူကျဲကျဲတွင် ဧည့်သည် တစ်ဦး မိမိအိမ်သို့ ၀င်ရောက်လာသည် ဆိုပါစို့။ မည်ကဲ့သို့သော စိတ်ထား၍ ထိုဧည့်သည်အား ဆက်ဆံမည်လဲ။ ထို ဧည့်သည် နေရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင် ၀င်ခံစား ကြည့်လိုက်ပါ။ ငါသာ ဆိုရင် နေပူကျဲကျဲထဲ လာရတာ ရေဆာရှာ မပေါ့။ ဟုတ်ပြီ ရေ အရင်တိုက်မယ်။ ချွေးသံရွှဲရွှဲ ဖြစ်နေတော့ အိုက်ရှာ မပေါ့။ ယပ်တောင်လေး ကမ်းသင့်ရင် ကမ်း။ ဗိုက်လည်း ဆာချင် ဆာမပေါ့။ ငါ့အိမ်မှာ ဘာစားစရာ ရှိပါလိမ့်။ ရှိတာလေး ချကျွေးတန်ကျွေး.. စသဖြင့် မေတ္တာစိတ် အပြည့်ထားကာ ကိုယ်ချင်းစာသော စိတ်ဖြင့် နှလုံးသားချင်း ထပ်တူပြု၍ ရွက်ဆောင် သင့်ပေသည်။
သီလ အမှုတွင်ကော.. နှလုံးသားချင်း ထပ်တူပြုသော မေတ္တာစိတ်ပင် အခြေခံပေသည်။ “အော် ငါလည်း သေမှာ ကြောက်သလို သတ္တ၀ါတွေဟာ သေမှာ ကြောက်ကြတာပဲ။ အဲဒါကြောင့် ငါ သူ့အသတ်ကို မသတ်ဘူး”၊ “ငါပိုင်တဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခု ပျောက်ပျက်သွားခဲ့ရင် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင် ငါ တော်တော် နှမြောတာပဲ၊ ငါ့လိုပဲ သူတစ်ပါးလည်း သူပိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပျောက်ပျက်သွားရင် စိတ်ဆင်းရဲ ရှာမှာပဲ၊ နှမြောမှာပဲ၊ အဲဒါကြောင့် ငါ သူများ ပစ္စည်းကို မခိုးဘူး”၊ “ငါ့ သားမယားကို စော်ကားရင် ငါမကြိုက်သလို သူလည်း သူ့သားမယားကို ဖျက်ဆီးတာ ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ၊ ငါ့အိမ်ထောင်ကို အပြိုကွဲ မခံနိုင်သလို၊ သူလည်း သူ့အိမ်ထောင်ကို ဘယ် ပြိုကွဲချင်ပါ့မလဲ၊ အဲဒီတော့ ငါ သူများ သားမယားကို မပြစ်မှား မစော်ကားဘူး” စသည် စသည်ဖြင့် ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်းကာ သီလ အမှုကိုလည်း စောင့်ထိန်း သင့်ကြပေသည်။
အစပိုင်းတွင်တော့ နှလုံးသားချင်း ထပ်တူပြု၍ မေတ္တာ ထားမှုသည် မလုပ်ဖူးသေး သူများ အဖို့ အနည်းငယ် ခက်တန်ကောင်း ခက်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ဒီအလုပ်ဟာ ခက်တာပဲ၊ ငါနဲ့ မကိုက်ပါဘူး ဆိုပြီး စမလုပ်ကြည့်ဘဲ ပစ်မထားသင့်ပါ။ ဘယ်အလုပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစပိုင်းတွင်တော့ ခက်ကြသည် ချည်းသာ။ စမိဖို့သာ အရေးကြီးပါသည်။ ထိုသို့သာ စမိပြီး လေ့ကျင့်ယူသွားမည် ဆိုပါက နောင်တစ်ချိန်တွင် မိမိကိုယ်ကိုပင် မိမိ အံ့ဩရအောင် အသားကျသွားပေမည်။ လုပ်ရဲသွား ပေမည်။ နှလုံးသားချင်း ထပ်တူပြု၍ သတ္တ၀ါတွေ အပေါ် မေတ္တာ ထားနိုင်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း…။
ဤကဲ့သို့သော တရား အသိများအား နှလုံးသွင်း ဆင်ခြင် ပွားများ တတ်အောင် သင်ကြားပေးတော် မူခဲ့သော ပိုင်းလော့ ဆရာတော်ဘုရား၊ ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလနှင့် သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ အပေါင်းတို့အား ဤ ဆောင်းပါးဖြင့် ရိုသေ ၀ပ်တွား ရှိခိုး ကန်တော့အပ်ပါတယ် ဘုရား..။
by Pyae Sone Aung on Monday, April 25, 2011 at 4:16pm
ကြည့်မိတဲ့သူမှာအပြစ်ရှိသလား ၊ ၀တ်တဲ့သူမှာအပြစ်ရှိသလားဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးခန်းခေါင်းစဉ် လေးကိုဖတ်မိလို့ ဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ဖို့သတိရသွားတာပါ။ အဲ့ဒီဆွေးနွေးခန်းခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဆွေးနွေးထားကြတဲ့သူတွေရဲ့ အတွေးအမျိုးမျိုးကိုဖတ်ပြီး ကျေနပ်မှုတွေတွေ့ရသလို ၊ ရင်မောရတဲ့အရေးအသားလေးတွေလည်းတွေ့မိတော့ ဒီစာလေးကို ပိုပြီးဖတ်စေချင်မိပါတယ်။
အမေ - လူထုဒေါ်အမာ က ကလျာမဂ္ဂဇင်း မှာ ပြောထားတာလေးကို မြန်မာမိန်းခလေးများ သတိပြုမိစေဖို့ ပြန်လည်ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
အမေပြောခဲ့တာက ဒီလိုပါ - မြန်မာမတွေရဲ့ အမျိုသားဝတ်စုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ အမျိုးသားဝတ်စုံရယ်လို့ ရှိချင်သေးလား။ မရှိရင်လည်း ရတာပါပဲလို့ အောက်မေ့နေကြသလား။ ရှိချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ထစ်ဆုံး ထဘီတော့ ၀တ်စုံအဖြစ်သတ်မှတ်ရဦးမှာပါပဲ။ ဟိန္ဒူအမျိုးသမီးများကို ကြည့်လိုက်ရင် ဆာရီဟာ သူတို့အမျိုးသားဝတ်စုံပါပဲ။
ဒါဟာ အခုပြသနာလုပ်နေရတယ်။ အမျိုးသားဝတ်စုံရှိနေချင်သေးလား၊ မရှိချင်တော့ဘူးလားဆိုတာကို ငြင်းခုန်နေရတယ်။ ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ ဒီခေတ် တက်လူမိန်းကလေးတွေက ခါးမှာထမီမ၀တ်ကြတော့ဘဲနဲ့ စကတ် တို့ ၊ ဘောင်းဘီ တို့ ၀တ်နေကြလို့ပါ။ စကတ်ဆိုတာ ထဘီ မဟုတ်ပဲနဲ့ ထဘီယောင်ဆောင်ထားတဲ့ အ၀တ်တမျိုးပါ။ သူက ခါးပေါ်မှာတော့ဝတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထဘီလို လုံလုံခြုံခြုံ ချီထားဖုံးထားတဲ့ အ၀တ်အထည်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ ပေါင်ရင်းလောက်တိုတဲ့စကပ်ရှိတယ် ၊ ဒူးအောက်ရောက်တဲ့စကပ်ရှိတယ် ၊ စကပ်ကို ပေါင်ရင်းအထိခွဲထားတဲ့ စကပ်ရှိတယ် ၊ အခုနောက်တည့်တည့်ကခွဲတဲ့စကပ်တောင်ရှိသေးတယ်။ အခုမြန်မာမလေးတွေ ၀တ်တဲ့စကပ်က ပေါင်လောက်ထိတိုတဲ့ စကပ်တောင် ရှိနေပါပြီ။ ၀တ်ရဲတဲ့သူတွေက ၀တ်နေကြပြီ။ နို့ပေမယ့် ဘေးခွဲ ၊ နောက်ခွဲ နဲ့ စကပ်ရှည်ရှည်တွေကတော့ မြန်မာမိန်းကလေးတိုင်းလိုလို ၀တ်ဝံ့တာမြင်နေရပြီ။
အပေါ်ပိုင်းကျပြန်တော့လည်း ရင်ညွန့်အထက် ဘာမှ မရှိဘူး။ အမေတို့ရှေးတုန်းက အမျိုးသမီးတွေဟာ ရင်လျားကြီးနဲ့ လူထဲမထွက်ရဲကြပါဘူး။ ခုတော့ရင်လျားထားတဲ့အတိုင်း အပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့ လက်သန်းတခြမ်းလောက် ကြိုးလေးတွေသာ ပခုံးမှာချိတ်လို့ လူမြင်ကွင်းမှာ သွားနေလာနေကြတာ မသင့်လျှော်လွန်းပါဘူးကွယ်။ ဟိုး ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကတည်းက ``အရှက်ကို အသက်နဲ့လဲမယ် ´´ ဆိုပြီး အမေတို့မြန်မာမိန်းမတွေ ကြွေးကျော်ခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်။ အရှက်ကို အသက်ထက်ပိုပြီး တန်ဖိုးထားတဲ့စကားပါ။ ဒါကြောင့် သမီးလေးတို့ကရော သမီးလေးတို့ရဲ့ အုပ်ထိန်းသူတွေကပါ ၀ိုင်းဝန်းတည့်မတ်ပေးကြပါ။
ပြီးတော့ ထဘီ နဲ့ စကပ် ရဲ့ ကွာခြားမှုကို အမေနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်။ ထဘီက ၀တ်ရင်း ၊ ထိုင်ရင်းကနေ တနေရာမှာ တခုခုစွန်းသွားပေသွားလိုကရှိရင် အဲ့ဒီအစွန်းအပေကို လွယ်လွယ်လှည့်ဝတ်လို့ရတယ်။ ဖုံးကွယ်လို့ရတာပေါ့။ စကပ်ကတော့ ဘောင်းဘီလိုပဲ ဘယ်နေရာပေပေ ဒီအပေကို လှည့်လို့လည်းမရဘူး။ ဒါကြောင့် ဖုံးလို့ကွယ်လို့မရဘူးပေါ့။
နောက်တခုက မြန်မာမိန်းကလေးတွေ ဘောင်းဘီဝတ်တာကိုလည်းပြောချင်သေးတယ်။ တောထဲတောင်ထဲ ခရီးကြမ်းသွားလို့ ထိုင်ထကောင်းတဲ့ဘောင်းဘီမို့ ၀တ်တာမျိုးကို အမေမပြောလိုပေမယ့် အခုခေတ်မြို့ပေါ်က မြန်မာမိန်းကလေးတွေဝတ်တဲ့ ဘောင်းဘီမျိုးကိုတော့ အမေအတော်အံ့သြမိတယ်။ ချက်ပေါ်အောင်ဝတ်တယ်။ အပေါ်အင်္ကျီတိုနံ့နံ့နဲ့မို့ ဘောင်းဘီနဲ့ ကုန်းကွနေရင် အမျိုးသမီးအောက်ခံ ဘာရောင်ဝတ်တယ်ဆိုတာတောင် မောင်နဲ့နှမ သားနဲ့အမိ အမြင်မတော်တာတွေတွေနေကြရပြီ။ အမေတို့မြန်မာဓလေံထုံးစံက မိန်းကလေးဝတ်တဲ့ အ၀တ်အစားဟာ ``ဣနြေ္ဒရတယ်´´ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ပါရတယ်။ အ၀တ်အစားကိုက လျှပ်ပေါ်တယ် ၊ လော်လီတယ် ဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။ အခုတော့တမင်ပဲ လျှပ်ပေါ်လော်လီတဲ့ အဆင်အပြင်ကိုရွေးဝတ်နေကြတယ်။ အမေတို့မြန်မာမိန်းမတွေမှာ ဖုံးကွယ်အပ်တဲ့အရာဆိုတာရှိတယ်။ ဖော်လှစ်သင့်တဲ့အရာဆိုတာရှိတယ်။ ဘယ်ဟာကဘာလဲလို့မသဲကွဲရင် အမေ့ကိုတိုးတိုးမေး။ အခုတော့ တချို့မိန်းကလေးတွေက ဖုံးကွယ်အပ်တဲ့အရာကို အလွန်တရာ ဖော်ချင်လှစ်ချင်ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါဟာ ခေတ်မီတာ ခေတ်ဆန်တာလို့ ထင်နေသလား။
ခုခေတ်မိန်းကလေးတွေရဲ့အမြင်က အမေတို့နဲ့ တော်တော်ကို ကွာဟနေတယ်။ ဥပမာဆိုပါတော့ အမေတို့တသက်လုံးလက်ခံလာတာက `ချက်´ဆိုတာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖော်လှစ်အပ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ လုံလုံခြုံခြုံ ဖုံးကွယ်ထားရမဲ့အရာမျိုး။ အခုခေတ်မိန်းကလေးတွေက ဒီချက်ကြီးကို ဖော်ရုံလှစ်ရုံမကဘူး ရွှေငွေရတနာများ ဆင်ယင်သေးသတဲ့။ အံ့သြလို့မဆုံးဘူး။ သူတို့အဖေတွေကလည်း ဒါကိုကြည့်နေကြသတဲ့။ အဲ့ဒီတော့ခေတ်ကြီးကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား လူတွေကဲလာရဲလာတာကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား ၊ အမေအသက်၇ှည်နေသေးတာကိုပဲအပြစ်တင်ရမလား မပြောတတ်တော့ဘူး။
kyi lin par say, ကြည်လင်ပါစေ
Rome Emperor: Marcus Aurelius
min ma shi tae akar..
Let's go home Mom!!!
Buddha FM Radio News
Way to reduce "Anger" (ဒေါသကိုဘယ်လိုပယ်မလဲ)
A Bi` Dhamma Summary (အဘိဓမ္မာ အကျဉ်းချုပ်)
Britney Spears: From The Bottom Of My Broken Heart...
#002 "Thingyan Moe" Myanmar Movie Film on Myanmar ...
Say "GoodBye" with Smile... :)
တစ်ချိန် မိတ်ဆွေသာ ဒီဘ၀ရောက်မယ်ဆိုရင်..!!!
နှစ်သိမ့်တတ်သူများ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်ကြ ပါတယ်
လူ နှင့် ဖေ့စ်ဘုတ်
သူတော်ကောင်း ဂုဏ်ရည် နှင့် နှလုံးသား
*** သူတော်ကောင်းတို့၏ စိတ်နှလုံး...